Amiir Maxamuud Yusuf Ciise oo ka mid ah Issimada Puntland oo si diiran loogu soo dhaweeyey Minneapolis, Minnesota. – Radio Daljir
Febraayo 18, 2010 12:00 b 0
Minneapolis, Feb 18 – Waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey Magaalada Minneapolis Amiir Maxamuud Yusuf Ciise oo ka mida Isimada Puntland. Amiir Maxamuud ayaa socdaal dheer kaga yimid dalka Soomaaliya wuxuuna soo maray wadamada Yurub; wuxuuna hadda Amiirku ka yimid Magaalada Seattle Washington oo uu mudo asbuuc ah joogay.
Amiirka ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee Minneapolis Saint Paul International airport waxaa goobta ku soo dhaweeyey dadweyne aad u faraban oo ay ka mid ahaayeen bulshada qaybaheeda kale duwan oo ay ugu horeeyaan Odayaal dhaqanka Soomaaliyeed iyo Aqoonyahano iyo dhammaan bulshadu qaybaha ay ka kooban tahay
Amiir Mohamud Yusuf ayaa loo galbiyey Hotel Ramada waxaana Hotelka soo buuxdhaafiyey dadweyne aad u faraba badan oo soo dhaweynayey Amiir Mohamud waxayna ruxayeen Caleemo ubax ah waxayna ku dhawaaqayeen ku soo dhawow Jaaliyadda Soomaliyeed ee Waqooyiga America iyo erayo ay ka mid ahaayeen ku soo dhawoow Gobolka Minnesota Welcome to Minnesota.
Amiir Mohamuud Yusuf Ciise ayaa soo dhaweyntii Hotel ka ka dib waxaa Odayaasha dhaqanka Soomaliyeed iyo aqoonyahano ay wada qaateen Casho sharaf iyo kulan gaaban oo soo dhaweyn ah martida qayba ka mid ah ayaa Amiirka hadal kaftana ku tuurayey ayaga oo leh Amiir soo dhawoow waxaa farxad noo ah in aad tahay dhalinyaro saldano dhaqan wata waxaadna moodaa in golaha dhaqan ka soomaaliyeed ay dhalinyaradu ku yaraayeen.
Amiir Mohamuud Yusuf Ciise waxaa la doortay Bishii August 13 keedii sanadkii 2009 waxaana lagu caleema saaray Magaalada Dudun oo u jirta Magaalada Gaalkacyo ee xurunta Gobalka Mudug 85 kiilow Mitir.
Waxaa lagu wadaa xaflad aad loo soo agaasimay in loo qabto Maalinta jamcaha ah ee nagu soo aadan bishuna ay tahay Feb,19,2010 waxaana dadweyna badan sugayaan in ay ka dhagaystaan Amiir Mohamud war bixin ku saabsan Soomaliya.
Sawirada soo dhaweynta Amiirka …